အကြီးတန်းခရီးစဉ်အပေါ် Plus အားအခြားအရာသီအလိုက်အနိုင်ရရှိမှတ်တမ်းများ
၎င်း၏အလွန်အမည်ချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်အနိုင်ရတဲ့အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုသိကျွမ်းသူကိုဂေါက်သီးနှင့်ပြည့်ဝ၏ကိုပြောပြသည်။ ဒီစာမျက်နှာတွင်ကျနော်တို့နှစ်တိုင်းခရီးစဉ်ရဲ့တည်ရှိမှုစဉ်အတွင်းအနိုင်ပေးအတွက်အကြီးတန်းခရီးစဉ်ကိုဦးဆောင်သူဂေါက်သီး (s) ကိုစာရင်းပြုစု။
နှစ်ဦးကဂေါက်သီးနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤစံချိန် share - မဟုတ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် - ရေနစ်မြုပ်၏ခန်းမ: ပတေရုသသွန်မ်ဆင်နှင့် Hale က Irwin ။
ပတေရုသသွန်မ်ဆင်: 1985 ခုနှစ်မှာ9အနိုင်ပေး (22 စတင်အတွက်)
Hale က Irwin: (23 စတင်မှာ) 1997 ခုနှစ်9ကိုအနိုင်ပေး
ဤမှတ်တမ်းသည်-ကိုင်ဆောင်သူခုနစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနှစ်များတွင်အောင်ပွဲအတွက်ချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်ကိုဦးဆောင်သူ (သို့မဟုတ်ဦးဆောင်ဘို့အချည်ထား) ခဲ့သူ Bernhard Langer ဖြစ်ပါသည်: 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 နှင့် 2017 ။
Bernhard Langer - အနိုင်ပေးအတွက်ဦးဆောင်7နှစ်
Hale က Irwin -4ကြိမ်
Lee က Trevino -3ကြိမ်
Miller ကဘာဘာ -3ကြိမ်
အခုတော့ဒီမှာနှစ်စဉ်အနိုင်ပေးအတွက်ချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်ကိုဦးဆောင်သူဂေါက်သီး (ဇယားအောက်တွင်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းများရှိပါတယ်) နေသောခေါင်းစဉ်:
ခုနှစ် အများစုမှာနိုင်ပွဲများနှင့်အတူဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား နိုင်ပွဲများ၏အမှတ်
2017 Bernhard Langer 7
2016 Bernhard Langer 4
2015 ဂျက်ဖ် Maggert 4
2014 Bernhard Langer 5
2013 Kenny ပယ်ရီ 3
2012 မိုက်ကယ်အယ်လန်, ရော်ဂျာချပ်မန်း, Fred သည်စုံတွဲများ,
ဒါဝိဒ်သည် Frost က, Fred သည် Funk, Bernhard Langer,
တွမ် Lehman, ဝီလီဝုဒ် 2
2011 ခုနှစ် ယောဟန်သည်ကွတ်ခ်, တွမ် Lehman 3
2010 Bernhard Langer 5
2009 Bernhard Langer 4
2008 Bernhard Langer က Eduardo ရိုမီယို 3
2007 ခုနှစ် ဂျေး Haas 4
2006 Loren Roberts သည်, ဂျေး Haas 4
2005 Hale က Irwin 4
2004 Craig Stadler 5
2003 Craig Stadler 3
2002 Hale က Irwin, ဘော့ Gilder 4
2001 ခုနှစျ Larry ကနယ်လ်ဆင် 5
2000 Larry ကနယ်လ်ဆင် 6
1999 ဘရုစ် Fleisher 7
1998 Hale က Irwin 7
1997 Hale က Irwin 9
1996 ဂျင်မ် Colbert 5
1995 ဂျင်မ် Colbert, ဘော့ Murphy 4
1994 Lee က Trevino 6
1993 Dave ချတ 5
1992 Lee က Trevino 5
1991 သူ Mike ဟေးလ် 5
1990 Lee က Trevino 7
1989 ခုနှစျ ဘော့ချားလ်စ် 5
1988 ဘော့ချားလ်စ်, ဂယ်ရီ Player ကို 5
1987 chi chi Rodriguez 7
1986 ဘရုစ် Crampton 7
1985 ပတေရုသသွန်မ်ဆင် 9
1984 Miller ကဘာဘာ 4
1983 ဒွန်ဇန်နဝါရီ 6
1982 Miller ကဘာဘာ 3
1981 Miller ကဘာဘာ 3
အဘယ်အရာကို 1980 ခုနှစ်ကော? သောချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်၏သမိုင်းအတွက်တစ်နှစ်တာ 1 စဉ်းစားသည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာ 1980 ခုနှစ်တီးခတ်သာလေးပြိုင်ပွဲ ရှိ. , တစ်ဦးချင်းစီဟာကွဲပြားခြားနားသောဂေါက်သီးအားဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် 1980 ခုနှစ်များအတွက်အနိုင်ရရှိခေါင်းဆောင်များ, တဦးတည်းအောင်ပွဲအသီးအသီးနှင့်အတူ, ရောဘတ် De Vicenzo, ဒွန်ဇန်နဝါရီလ, အာနိုး Palmer ကနဲ့ Charlie Sifford ခဲ့ကြသည်။
Hale က Irwin အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 45 နှင့်အတူအနိုင်ရအများဆုံးများအတွက်စံချိန်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ဤမှတ်တမ်းသည် Irwin နှင့် Langer ပိုင်ဆိုင်:
11 နှစ် - Hale က Irwin (1995-2005)
11 နှစ် - Bernhard Langer (2007-17)
9 နှစ် - Miller ကဘာဘာ (1981-89)
9 နှစ် - Gil မော်ဂန် (1996-2004)
8 နှစ် - ဒွန်ဇန်နဝါရီလ (1980-87)
8 နှစ် - Chi Chi Rodriguez (1986-93)
8 နှစ် - ဂျင်မ် Thorpe (2000-07)
chi chi Rodriguez သည့် 1987 ရာသီအတွင်းတစ်တန်းလေးချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုဆက်တိုက်အောင်ပွဲများအတွက်အကြီးတန်းစံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Rodriguez ဟာဂုဏ်တော်, ယူနိုက်တက်ဆေးရုံတွေ Classic, Silver, စာမျက်နှာများဂန္ထဝင်နှင့်အကြီးတန်းကစားသမားရီရူနီယန်ပြိုင်ပွဲမှာ 1987 Vantage အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
နှစ်ကြိမ်ချန်ပီယံ Tour သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် 25 ဂေါက်သီးတစ်ရာသီအတွင်းကိုအနိုင်ပေးတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ 1995 ခုနှစ်နှင့် 2003 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ဂေါက် Almanac အညွှန်းကိန်းသို့ပြန်သွားသည်
2018 မာစတာပြိုင်ပွဲ: ရိဒ် Challenge ဟာ Off ကျင်းပ
2017 သမ္မတဖလား: တစ်ဦးကရေးအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံ Romp
ကလေးများပွင့်လင်းမှုအတွက် PGA Tour Shriners ဆေးရုံတွေ
ဥရောပခရီးစဉ် KLM ပွင့်လင်း
1995 ဗြိတိန်ပွင့်လင်း: Daly PLAYOFF အတွက်ဆွတ်ခူး
PGA Tour Q-ကျောင်း (Winners, အစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်အဘယ်အရာကိုအစားထိုး)
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားဆုံးဗြိတိန်ပွင့်လင်းချန်ပီယံ Won ဘယ်?
Handfasting တောင်း (ဆယျ့သုံးမင်္ဂလာသက်)
Yul Brynner ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Witold Rybczynski အားဖြင့်ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အလှဆုံးအိမ်
စစ်မှန်သောယင်ကောင်, အမိန့် Diptera
အီစတာ၏ 50 နေ့ရက်များ
အနောက် Wight Potter 19 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
တစ်ဦးတိရစ္ဆာန်ရုံနှင့် Sanctuary အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ?
ဥရောပခရီးစဉ်အပေါ် BMW ကား PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
စီးပွားရေးစာရေးဆရာ 10 တည်းဖြတ်သိကောင်းစရာများ
တောင်ပိုင်းသတ်ဖို့ - အရှေ့တောင်ပိုင်းအခမျးအနား Complex
အဆိုပါ Beatles သီချင်းများ: "တော်လှန်ရေး"
တစ်ဦး Pair ကိုစကိတ်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ရေခဲပြင် Dance Partner ကိုရှာပါရန်မည်သို့
1997 မာစတာ: က Tiger Woods ကသူ၏ပထမဦးစွာဗိုလ်မှူးဆွတ်ခူး
အခမဲ့လောင်းကစား Blackjack Play လုပ်နည်း